Zvigadzirwa Vatengesi uye Fekitori - Wholesale Zvigadzirwa Vagadziri
Isu tinoita elastomer kuvandudza uye kugadzira mukubatana pamwe nedzidzo nesainzi masangano muEurope kune epamberi mhinduro. Iyo yekutengesa cheni yevagadziri vesimbi ine mbiri yakanakisa yenyika uye yepasi rese inobvumira DeepFast kuunza mota dzakasimba kwazvo kumusika. Iko kusarudzwa kwakasarudzika kweakakosha mamakisi ezvinhu eDepFast motors inopa kuita kunodiwa kuita.
Kana iyo yekumanikidza yekumanikidza ine imwe simba ichipinda mukutenderera, iyo rotor inotenderera yakatenderedza iyo stator axis inotyairwa neiyo yekumanikidza matope kuti ipe simba kune iyo yekuboora zvishoma. Chikamu cheMagetsi ndiwo moyo wemota yekuchera, iyo inosarudza kuita kwakasimba.
Matrix Muviri PDC Drill Bit yakakodzera kune epakati akaomarara uye akaomarara mafomati ane akagadziridzwa korona mbiri uye cutters marongero. Inogona kuita zvirinani kuita mune zvakadzama zvikamu. Hupenyu hwakareba hwebasa uye kuita kwakanyanya kunobatsira kudzikisa mutengo wekuchera.
Simbi Muviri PDC Drill Bit
PDC chibooreso chinonyanya kushandiswa kuchera Oiri zvakanaka, gasi tsime, mvura tsime, nezvimwewo Isu tinogadzira uye tinogadzira specifie PDC bit nekuita kwakanaka kune yega nyoro, yepakati uye yakaoma kuumbwa.
Simbi muviri nekuomesa tungsten carbide pamusoro (WC), ita kuti chibooreso chirume zvese zvakakwirira simba uye yakasimba kwazvo abrasion kuramba.
Yakadzika torque dhizaini dhizaini uye software yakagadzirirwa zino inoderedza iyo yekucheka kumucheto kupfeka & kuwedzera hupenyu.
Iyo yesainzi yekuchera yakasimba equilibrium dhizaini uye hydraulic chiyero dhizaini inoita kuti iko kuchera kwacho kuve kwakatsetseka.
Simbi Muviri PDC Drill Bit inowana zvirinani ROP mune yakapfava kune yepakati yakaoma mafomati uye yakadzika compressive simba.
Matrix Muviri PDC Bi-pakati Drill Bit
Matrix Muviri PDC Bi-pakati Drill Bit yakakosha zvishoma yakagadzirirwa kugadzirisa kudzoreredza. Iine zvakanakira kukwirira kwekuchera kushanda, hupenyu hurefu hwebasa, yakadzika torque uye yakadzika vibration panguva yekuchera.
Simbi Muviri PDC Bi-pakati Drill Bit
Yakasarudzika yemukati koni dhizaini: Iyo yemukati koni yeiyo bit inotora yakasarudzika geometric chimiro uye dhizaini, iyo inovandudza kucheka kuita kweiyo yepakati chikamu cheiyo bit uye inowedzera hupenyu hwakazara hweiyo bit.